Ukufumana kwakhona Outlook Express Idatha evela kwiTemporary Iifayile
Ikhaya iimveliso DataNumen Outlook Express Repair Ukufumana kwakhona Outlook Express Idatha evela kwiTemporary Iifayile
Nini Outlook Express idibanisa ifayile .dbx, iyakwenza itemporary .dbt fayile phantsi kwifolda efanayo nefayile ye .dbx. Umzekelo, ukuba uyicompact Inbox.dbx file, ke itemporary iya kuba yi-Inbox.dbt.
Xa impazamo isenzeka ngexesha lokusebenza okucwangcisiweyo kwaye awungekhe ungene kwifolda yakho yeposi, awungekhe uphinde ubuye idatha efunwayo kwifayile ye-.dbx, emva koko kusenokwenzeka ukubuyisa idatha yakho kwi-temporary .dbt, ngolu hlobo lulandelayo:
Fumana ifolda apho kugcinwa ifayile ye.
Jonga ukuba kukho itemporary .dbt ifayile phantsi kwifolda efanayo.
Ukuba ewe, uyiqambe kwakhona kwenye ifayile kunye nokwandiswa kwefayile ye-.dbx, umzekelo, ukuba ifayile ye .dbt ibizwa ngokuba yi-Inbox.dbt, ngoko unokuyibiza kwakhona kwi-InboxTemp.dbx.
ukusebenzisa DataNumen Outlook Express Repair ukuskena ifayile ye-InboxTemp.dbx kwaye ufumane ii-imeyile kuyo.